२५ औं महान जनयुध्द दिवसको एक सस्झना… «
२५ औं महान जनयुध्द दिवसको एक सस्झना…
प्रकाशित मिति : 13 February, 2020 10:10 am
बल राम तिमल्सिना
आजभन्दा पच्चिस वर्ष अघिको फाल्गुण दुई गते विहान थियो । म सिन्धुली जेलमा थिएँ । जेलभित्र हामी थोरै मात्रै माओवादी थियौं । केही जेलभित्रै बनाइएका माओवादीहरू थिए । बिहानै बिहानै प्रहरीले हल्ला गर्दै मलाई गेटमा बोलायो ।म गेटमा पुगेपछि प्रहरीले भन्यो-” हेर तेरो पार्टीले हिजो टाँसेको पोष्टर ! हिजो राती सिन्धुली गढी चौकी पनि हान्यो । खुव युध्दका कुरा गर्थिस नि , सुरु भयो अव !”
मैले प्रेम पूर्वक पोस्टर हेरें ।
“प्रतिकृयावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्न जनयुध्दको बाटोमा अघि बढौं !” लेखेको पढ्दा पढ्दै खुसीको सीमा नै रहेन ।
कैयन वर्षदेखि सजाएको विद्रोही सपनाको मशाल नेपाली धरतीमा बालिएको थियो ।अर्थात देशमा जनयुध्द थालिएको थियो ।
त्यो साँझ जेल भित्रै कुखुरा काटेर भोज गरियो । हर्ष बडाइँ गरियो , हाँसियो रमाइयो नाचियो ।
कत्रो संसार हुन्छ र जेलमा ! तै पनि युध्दमै सहभागी भए जस्तै खुसी लाग्यो ।
हिसाव गरेर ल्याउँदा पच्चिस वर्ष पुगेछ । नेपाली धरतीमा दश वर्षसम्म टिकेर , दशै वर्षको उमेरमा नेपालको प्रतिकृयावादी राज्य सत्तालाई दिसा पिसाव उम्काउँने तहमा पुर्याउँन सफल नेपाली जनताको महान विद्रोह आफैंले असामयिक मृत्यु वरण गर्यो।
आज जनयुध्द छैन। जनयुध्दले नेपाली समाजको चेतनामा छोडेका सुख दुखका प्रभावहरू छन। जनयुध्दबाट विकसित एउटा सानो धारा अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गर्दै बाटो खोज्दै छ। जनयुध्दको ठूलो मुल्को संसोधनवादमा पतीत भएर सत्ताको जुठो हड्डी चुसेर बसेको छ।
बिचलन, विभाजन र विसर्जन पछि आत्म समर्पण, भागदौड र गद्दारी मूल धार बनेको छ। अहिले पनि साम्राज्यवादका नाङ्गा नोकर बन्न पुगेकाहरूले जनयुध्दको औताली खाइरहेका छन् र अख्तियारी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यस्तो दुखद परिस्थितिमा पनि हामीले सम्हालिनु परेको छ। सोच्नु परेको छ । आत्म समिक्षा र समिक्षा गर्नु परेको छ । समाज रुपान्तरणप्रति प्रतिवध्दहरूले आफू लास भैनसकेको प्रमाण पेश गर्नु परेको छ।
हो आज जनयुध्द छैन। जनयुध्दका झिल्का झिल्की प्रभावहरू जनचेतनामा छन र ती महान छन। जनयुध्दको बिराट चेतना र शक्तिकै कारण देशमा गणतन्त्र छ र एति कुरा निर्धक्क बोल्न पाइएको छ। यो अधिकार कुनै तानाशाहले उदारतापूर्वक बक्स भएको सुविधा हैन ।बरु नेपाल आमाका हजारौं सन्तानको मृत्युसँग साटिएको पवित्र अधिकार हो ।
महान जनयुध्दको थालनीको पच्चिसौं वर्षको यो विहानीमा म सर्व प्रथम जनयुध्दका महान सहिदहरूप्रति विनम्र श्रध्दान्जली अर्पण गर्दछु । हजारौं वेपत्ता योध्दाहरू प्रति गहिरो आदरसहित अभिवादन गर्दछु। महान सहिदका परिवार जनहरूमा प्रेर र आदरपूर्ण अभिवादन टक्र्याउँछु । युध्दका घाइते तथा अपाङ्ग योध्दाहरूमा न्यानो अभिवादन पेश गर्दछु । महान जनयुध्दमा अतुलनीय योगदान गर्ने समस्त योध्दा तथा जन समुदाय प्रति अभिवादन प्रकट गर्दछु । र अन्तमा आगो बचाउँनु पर्ने यो जटील परिस्थितिमा चेतनाको आगोलाई बचाइराख्न हाम्रो वर्गलाई शक्ति र प्रेरणा प्राप्त होओस भनेर हार्दिक कामना गर्दछु ।
महान जनयुध्द जिन्दावाद !